Ireto no hijerena: firenena 5 mankamin'ny fanarenana avy amin'ny COVID-19
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ireto no hijerena: firenena 5 mankamin'ny fanarenana avy amin'ny COVID-19
Maherin'ny telo tapitrisa ny tranga voamarina ary maherin'ny 200,000 ny maty eto amin'izao tontolo izao, vitsy ny famantarana ny Covid-19 ny areti-mandringana dia mampihena ny fitomboany manerana an'izao tontolo izao. An'arivony ny olona mararin'ny viriosy isan'andro, miaraka amin'i Etazonia, Espana, Italia, France ary Iran ny sasany amin'ireo firenena traboina indrindra. Na izany aza, ny firenena sasany dia toa nahavita nampihena ny tahan'ny tranga vaovao ary ankehitriny dia toa mandeha amin'ny lalana miadana sy mety sarotra mankany amin'ny fanarenana. Ireto misy:
Shina: Sina, ivon-toeran'ny fihanaky ny COVID-19, dia toa nifehy tsara ny fivoahan'ny virus. Manodidina ny 89 isanjaton'ny mararin'ny coronavirus any Shina no efa sitrana ary efa navotsotra tao amin'ny hopitaly, araka ny tatitra nataon'ny Vaomieran'ny fahasalamana nasionaly ao amin'ny firenena. Ny hamafin'ny sy ny haben'ny fepetra fifehezana napetraky ny governemanta sinoa dia nahatonga fihenan'ny tranga isanandro.
Korea Atsimo: Firenena iray hafa izay tafarina tamin'ny fomba mahomby dia Korea Korea. Ny maodelin'ilay paikadin'ny 'soritra, fitsapana ary fitsaboana' dia nanampy tamin'ny fanamafisana ny fihodinan'ny COVID-19 - maodely izay ankafizin'ny firenena tandrefana maro hafa. Tsy toy ny ankamaroan'ny firenena voakasik'izany, i Korea Atsimo dia niantehitra tamin'ny fanandramana marobe sy ny fanarahan-dia niomerika ireo tranga ahiahiana ho voan'io areti-mifindra io, fa tsy mametraka famonoana na famerana.
Hong Kong: Na eo aza ny toerana akaiky azy any Shina, nahomby tamin'ny fifehezana ny valanaretina i Hong Kong tamin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra hisorohana ny fifindrana ao anatiny. Nametraka quarantine 14 andro tsy maintsy atao ho an'ny olona avy any Shina ny tompon'andraikitra. Vetivety ihany koa izy ireo dia nanangana tranokala quarantine sy fandriana tsindry ratsy mba hitoka-monina araka ny tokony ho izy, ary hampihatra ireo fepetra manalavitra ny fiaraha-monina toa ny fiasana an-trano, ny fanafoanana ireo hetsi-bahoaka ary ny fanakatonana ireo sekoly.
Taiwan: Nahavita nitazona an'io valanaretina tamim-pahombiazana io i Taiwan, na dia eo akaikin'ny 128km (80 kilaometatra) miala ny tanibe China aza no misy azy. Nianatra tamin'ny fiparitahan'ny SARS teo aloha, ny governemanta dia nirotsaka an-tsehatra raha vantany vao nandre ny vaovao momba ny aretina toy ny pnemonia tany Wuhan tamin'ny volana desambra 2019. Nanomboka ny fisavana ireo mpandeha avy any Wuhan tamin'ny 31 desambra lasa teo izy ireo, nametraka rafitra iray hanarahana ireo tena. -quarantine, ary manatsara ny famokarana fitaovana fitsaboana ho an'ny fampiasana an-trano amin'ny Janoary. Izy ireo koa no firenena voalohany nandrara ny sidina avy any Wuhan, ny 26 Janoary. Ny fampiasana angona be ho an'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ny mponina ary koa ny rafi-pitsaboana ara-pahasalamam-bahoaka any Taiwan dia nanampy tamin'ny famerana ny fihanaky ny viriosy.
Aostralia: Na dia tombony azo aza ny fitokana-monina sy ny hakitrin'ny mponina ambany, ny valin-kafatra goavam-be nataon'ny governemanta dia tena nitondra fifehezana tsara ny areti-mandringana ao amin'ny firenena. I Aostralia dia iray amin'ireo firenena andrefana voalohany nandrara ny sidina avy any Sina tamin'ny 1 febroary 2020, fanapahan-kevitra iray izay nanakana ny fihanaky ny aretina. Izy io koa dia nametraka fandrarana tsy misy fetra farany amin'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena rehetra ny 20 martsa, amin'ny fanapahana ny famindrana ny viriosy avy any ampitan-dranomasina, izay nahitana ny ankamaroan'ny tranga teto amin'ny firenena. Ny fepetra henjana amin'ny fanalavirana ara-tsosialy toa ny baiko mipetraka ao an-trano dia nanampy tamin'ny fampihenana ny fifindran'ny fiaraha-monina ihany koa. Zava-dehibe, ny manam-pahefana ara-pahasalamana dia nanao fanandramana vondrom-piarahamonina marobe momba ny viriosy tany amin'ny toerana mety hampidi-doza, ka nahatonga ny iray amin'ny taha ambony indrindra amin'ny tahan'ny fitiliana patolojia diagnostika ho an'ny COVID-19 eto amin'izao tontolo izao ary mamela ny fihenan'ny tsimokaretina hamehezana mafy herinandro fa tsy volana.
IATA: crunch fahaizan'ny entana avy hatrany sy mafy